Ithuluzi lobuchwepheshe elisha elibiza izigidi zamarandi i-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI).
Izifundiswa Zase-UKZN Zisungule Indlela Entsha Yokuphucula Ukuhlinzekwa Kosizo Emphakathini
ODkt u-Andrew Okem noSithembiso Myeni baseSikoleni Sezifundo Zokwakha neZentuthuko bebambisene noMnyango WezeSayensi neZokuqamba, i-South African Local Government Association (i-SALGA) ne-Human Sciences Research Council (HSRC) basungule ithuluzi lobuchwepheshe elibiza izigidi zamarandi elibizwa nge-Municipal Innovation Maturity Index (i-MIMI).
Inhloso ye-MIMI wukusiza izikhulu zomasipala ukuhlinzeka ngosizo, ukuphuthumisa ushintsho emphakathini nokuqeda ububha okuhambisana nohulumeni onezinjongo zokuthuthukisa isizwe.
Lelithuluzi lizobheka ukuthi umasipala, uyinhlangano, ubhekana kanjani nesayensi nobuchwepheshe bese lenza izincomo zokuthi yiziphi izindawo ezidinga izindlela zokwenza izinto ngendlela entsha. Lilekelela omasipala ukuthi bahlelele indlela entsha yokwenza izinto bese bethuthukela ezingeni eliphezulu.
Umcwaningi omkhulu uMyeni uthe: ‘Bekumnandi ukuhola ithimba lase-UKZN nokubamba iqhaza ezinhlakeni ze-MIMI zezokuphatha nezokuthatha izinqumo.’
UMyeni ube neqhaza ekucabangeni ngezindlela zesayensi ukuhlinzeka umphakathi ngosizo nokuveza ubumqoka bokukala ubuchwepheshe obusha emkhakheni kahulumeni. ‘Ngikholwa wukuthi uma singakala, singakwazi ukuqonda, ukuphatha nokuhola. Ngimagange ukubhalisa omasipala kulomkhankaso omqoka ohlose ukususa izithiyo ekusebenzeni kobuchwepheshe. Belumqoka usizo esiluthole kubaholi nabasebenzi bomasipala ukuze lomkhankaso uphumelele. Sithakasele nokwesekwa ngabaholi base-UKZN okukhona kubona iDini yaseSikoleni seZifundo zoKwakha neZentuthuko nabasebenzi basemahhovisi nabafundisayo.’
Omunye umcwaningi omkhulu abebambisene naye u-Okem uthe: ‘I-MIMI ihlose ukukhuthaza isiko lezindlela ezintsha zokwenza izinto komasipala. Sixhumane nezikhulu zomasipala ngezithangami zokufunda ezihlukene ukucobelelana ngolwazi nethimba le-MIMI. Ngimagange ukubona uhlelo lwe-MIMI selwethulwe ezweni lonke neqhaza lalo ezindleleni zokwenza izinto ngezindlela ezintsha ezindleleni omasipala abasebenza ngazo ezweni.’
Isigaba sokuqala sokuhlola izinto ze-MIMI siveze ukuthi omasipala bangathola amaphuzu amaningi, saveza neqhaza elimqoka ekusetshenzisweni kwezindlela ezintsha zokwenza izinto. Ngemuva kokuhlola okube yimpumelelo, injongo yohlelo lukazwelonke wukuthi lufaka isigamu somasipala ngesigaba se-Medium-Term Strategic Framework.
‘Impumelelo enkulu ye-MIMI kuzoba wukukhethwa kwesikhungo esizokwengamela isigaba esilandelayo somsebenzi, okubalwa kukhona ukwethulwa kwemiklomelo yomasipala baseNingizimu Afrika ukubakhuthaza ukuthi baphucule umsebenzi wabo’ kusho uMyeni.
UMqondisi-Jikelele woMnyango WezeSayensi neZokusungula uDkt u-Phil Mjwara unxuse bonke ozakwabo kulo mkhankaso ukuthi babambisane nohulumeni ukusabalalisa izindlela ezizokweseka uhulumeni onamandla.
‘Nginxusa bonke ozakwethu ukuthi babambisane nathi ekwenzeni indawo elungele lomkhankaso kuhulumeni wonke nakomasipala,’ kusho yena ebala imikhankaso eminingi okuhloswe ngayo ukuthi ilethe izindlela ezintsha zokwenza izinto emphakathini.
‘Ngikholwa wukuthi i-District Development Model iyithuba elihle lokwethula ubuchwepheshe nezindlela ezintsha ezingavuselela imikhakha yomnotho evele ikhona, sibe sekhaleni lemithombo emisha yokusimama bese senza umkhakha wohulumeni onamandla selekelelwa wubuchwepheshe ukuphucula izinga lokuphila,’ kusho uMjwara.
Umbiko wokuqala wokuhlola umsebenzi womasipala oncike endleleni yokukala yesigaba sokuqala salo mkhankaso wethulwe emcimbini osanda kuba khona. Ekulungiseleleni lesigaba sokuqala bekukhona omasipala abangama-68 (omasipala abakhulu abayisishiyagalombili, omasipala bezifunda abangama-20 nomasipala bezindawo abangama-40).
Ukwethulwa kwe-MIMI yobuchwepheshe kwenze ukuthi ukusebenza komasipala nezikhulu zomasipala bathole indlela yokuhlola ukusebenziseka kwayo njengethuluzi lokuqoqa imininingwane. Lokhu kwenza ukuthi ithimba le-MIMI libuyekeze lelithuluzi. Isigaba sokuqala sisize ukuthi kubonakale izinkinga zokusebenza ezingaba khona ezingaphazamisa ukusebenza kwethuluzi le-MIMI ekusebenzeni ngendlela efanele, kwaveza ithuba lobuhixihixi obungaba khona obungavimba ukuthi lelithuluzi lisetshenziswe ngabantu abaningi.
Umfundi Wezobudokotela Ukhulume Ngokuba Manqika Kothisha Ngokugoma
Ukufunda Isayensi Ngesikhathi Se-COVID-19